Ahoana ny fanovana ny fampiantranoana tranokalanao soa aman-tsara | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fanovana ny fampiantranoana tranokalanao amin'ny fomba azo antoka
Nacho morato | | Nohavaozina tamin'ny 21/09/2016 10:39 | maro
Raha manana tranokala ianao, amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainanao dia tsy maintsy manova ny fampiantranoana ianao. Toa fanambarana mihoapampana izany, saingy zavatra iray na ho ela na ho haingana dia atrehin'ny webmaster rehetra. Na noho ianao nanana traikefa ratsy tamin'ny mpamatsy fampiantranoana anao na satria nahita zavatra hafa mora vidy kokoa ianao na manolotra anao ny serivisy sy / na ny saina ilainao. Miova anefa ianao rehefa mandeha ny fotoana.
Tsy lazaina intsony fa hetsika marefo izay tsy maintsy atao am-pitandremana sy amin'ny fomba ampifanarahana mba tsy ho sendra ny mpamaky anao hitety tranonkala na hahita zavatra hafahafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome andian-dahatsoratra anao izahay torohevitra raha sanatria miatrika fifindra-monina voalohany ianao.
1 Manakarama ny fampiantranoana vaovao
2 Manaova dika mitovy
3 Avereno amin'ny laoniny ny backups amin'ny fampiantranoana vaovao
4 Hamarino raha tsara ny zava-drehetra ary ampifanaraho ny tranokala vaovao
5 DNS fiovana
Manakarama ny fampiantranoana vaovao
Zava-dehibe ny manao azy alohan'ny lany ny fifanarahana nataonao tamin'ny taloha. Ny zavatra tsara indrindra alohan'ny hidiranao hiasa dia jereo raha mahasoa anao ny fampiantranoana vaovao anao ary mifindra ny kaontinao. Raha izany dia tsy mila manome ny angon-drakitra fidiranao fotsiny ianao. siteground Safidy tsara io satria mikarakara fifindra-monina maimaimpoana foana izy ireo ary amin'izany dia ialanao ny aretin'andoha. Ankehitriny koa dia eo am-pisondrotana izy ireo ary manolotra anao koa izy ireo tfamindrana sehatra maimaim-poana ary fanonerana hatramin'ny 6 volana maimaim-poana amin'ny fampiantranoana ho an'ny fanovana mialoha ny mpamatsy. Amin'izany fomba izany dia tsy hiandry ny fiafaran'ny fampiantranoana anao ankehitriny ianao, azonao atao ny manova ny Siteground ary homena anao maimaimpoana 6 volana raha sanatria ka manana volana mialoha handoavana ny fampiantranoanao taloha.
Fa raha tsy maintsy miasa ianao dia vakio hatrany ity lahatsoratra ity satria homenay anao ny lakile rehetra hamindra ny tranokalanao tsy misy risika.
Miankina amin'ny tranokalanao ihany no mila mifindra monina afa-tsy rakitra na rakitra ary data. Midika izany ampitao ny fampahalalana rehetra avy amin'ny fampiantranoana iray mankany amin'ny iray hafa. Ankehitriny dia mahazatra be ny miara-miasa amin'ny WordPress ary hanome ohatra iray aho. Mba hamindra ny bilaogintsika ao amin'ny WordPress, dia tokony hampidina ny rakitra sy ny kopian'ny tahiry amin'ny FTP isika. Misy fomba samihafa ahazoana ny kopia avy amin'ny tahiry.
Avy amin'ny cPanel na ny tontonana fanaraha-maso ananantsika
Avy amin'ny phpMyadmin
miaraka amin'ny plugin WordPress
Avereno amin'ny laoniny ny backups amin'ny fampiantranoana vaovao
Efa manana ny zava-drehetra izahay ary mankany amin'ny tontonana fanaraha-maso ny fampiantranoana anay. Mampakatra ny fisie amin'ny alàlan'ny FTP izahay, mamorona ny tahiry ary mamerina amin'ny laoniny ireo kopia ary farany manova ny angon-drakitra mifandraika amin'ny tahiry izahay. Ao amin'ny WordPress dia ny wp-config.php, raha forum vBulletin izy io dia /includes/config.php ary ny CMS na ny script tsirairay dia manana ny rakitra misy azy miaraka amin'ny angon-drakitra fikirakirana. Ny mila ovaina dia ny angon-drakitra vaovao, ny solonanarana sy ny teny miafina vaovao, ary raha ilaina ny ip, na dia mahazatra aza dia avela toy ny miaraka amin'ny 'localhost'.
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny backup Manoro hevitra anao aho ny hampiasanao ny fomba nitovizanao. Raha manana tontonana fanaraha-maso mitovy ianao dia ampiasao. Raha niaraka tamin'ny phpMyadmin dia avereno toy izao.
Ho an'ny tahiry antonony na lehibe dia tsy mandeha tsara ireo fomba ireo. Ny tsara indrindra dia ny fampiasana SSH raha avelan'ny fampiantranoanao, saingy mihoatra an'ity lesona ity izany. Misy safidy azo idirana kokoa ve toa ny bigdump. Afaka mamela hevitra ianao raha mila fampahalalana bebe kokoa.
Hamarino raha tsara ny zava-drehetra ary ampifanaraho ny tranokala vaovao
Ity misy torohevitra mahaliana. Betsaka ny olona, ​​raha vantany vao azony ny backup dia averina amin'ny mpampiantrano vaovao, manova ny DNS mivantana, tsy fantany raha milamina na tsia ny zava-drehetra ary atahorana izany satria mety misy lesoka sy olana. Hatramin'ny simba ny tahiry data, olana enkodey sasany izay hamela antsika hanana litera hafahafa na hoe tsy novainay tsara ny angon-drakitra config mba hifandraisan'ny database sy ny hafa.
Ka hisorohana an'io dia izay azontsika atao dia adala ny tranokalanay. Raha manitsy ny rakitra mpampiantrano ny solosaina PC na laptop-tsika isika ary manampy andalana aminy amin'ny IP vaovao sy ny sehatra, dia holazainay amin'ny mpizaha tranonay fa rehefa miditra amin'ny adiresinay izy dia mankanesa any amin'ilay IP fa aza mankany amin'ilay an'ny manana .
Hiditra amin'izany isika ary hahita ny toetry ny zava-drehetra alohan'ny hanaovana ny fanovana DNS farany.
Ny fanovana DNS dia natao avy amin'ny registrar domain. Ny ataonay amin'izany dia ny milaza fa rehefa misy miditra amin'ny domain.com dia tsy mandeha any amin'ny adiresy vaovao izahay. Ireo fanovana ireo dia mety maharitra 48 ora vao hita (ity tranga ity dia fantatra amin'ny hoe fampielezana DNS) ary mandritra io vanim-potoana io dia mety misy olona efa mahita ny fampiantranoana vaovao ary ny hafa ilay taloha.
Raha manana forum ianao na manana hevitra maro ny bilaoginao ary ny tadiavinao dia ny hoe tsy noforonina sy very ireo vaovao, apetraho amin'ny fikojakojana sy fikajiana akaiky ny forum mandra-pahavonona ny zava-drehetra.
Ireo no ilay toro-hevitra lehibe rehefa manova fampiantranoana, tsy misy famakafakana ireo fananana na takiana tokony hananan'ny fampiantranoana tsara. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manome hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fanovana ny fampiantranoana tranokalanao amin'ny fomba azo antoka
manaratsy dia hoy izy:
Dalí manatrika ny fanontana faha 150 taonan'ny Alice in Wonderland
Ity tranokala kanto ity no toerana mangina indrindra amin'ny Internet azonao atao